Date My Pet » Unogona Sei ruvara munhu Fake Online Dating Profile?
Unogona Sei ruvara munhu Fake Online Dating Profile?
Last updated: Chivabvu. 18 2020 | 3 Maminitsi verenga
“Unoziva sei kuti nhoroondo yomunhu ari chaiye kwete chinhu vaiumba kuwana kuti utangewo paIndaneti kufambidzana paIndaneti? Ndingadai vawane na kubva kudanana panzvimbo saka ndinoda kubatana nayo, uye zvadaro na chete kumisa. Chii pamwe kuti?”
The Honest Mhinduro
Kuti tidzivise paIndaneti kufambidzana uori hukuru hunoitwa nevezvoutano, bheji nepaunogona ndiko kuramba zvikuru paIndaneti zvokufambidzana nzvimbo kuti zvave kumativi kwemakore mashomanana uye kuva guru nhengo chawo. Havazosimudzirani vanobvuma, asi ini pachangu kuona dzimwe diki kana kupfuura kujeka kufambidzana magazines 'Pedhi’ ari Website nevanhu vanonyepera Profiles uye kunyange paku kutumira shoko nhengo dzavo kubva ichi 'nyepera’ munhu ari netarisiro generating zvikuru basa iri panzvimbo.
The makuru, zvikuru yaizivikanwa kufambidzana site havana chikonzero chokuita ichi uye kazhinji vane vashandi vane basa ndiko kuongorora nhoroondo itsva uye masora kunze spammers uye all scammers. The makuru Nzvimbo vanewo mufananidzo paruzhinji kudzivirira, rinoshanda nepakudiwa yako. Kana uchifungidzira kuti munhu yokuva spammer kana Scammer, nechokwadi chokuti iwe dzinoshuma pavo pakarepo kuti Website kutsigirwa chikwata.
Nei mashoko kumisa pashure kubatana?
Kune mhando dzose zvikonzero kuti munhu chaiyeiye anogona kupindura mashoko ako uye vazhinji vavo vane chokuita newe pachako. Pamwe vakasimuka chaizvoizvo vakabatikana, vakasiya guta pazororo, kana akasarudza kuti kudanana paIndaneti akarurama asina chinhu chavo. Chinhu chinokosha pano haana kuti mwoyo. Pane mijenya zvakawanda hove mugungwa.
Ndingadai dzinorumbidza kuedza kutumira mashomanana mashoko pamusoro nzira shomanana asati asarudza mapfumo zvachose. Ndokuzo, kana uchiri regai chinodyika pano, fambira mberi.
Pane mamiriro ezvinhu apo munhu mashoko unogona kuva Scammer kuedza kutaura nemi chero chikonzero. nhoroondo idzodzo kazhinji kuwana uye wakaguma nokukurumidza pamusoro zvikuru kufambidzana magazines. Saka panguva wapindura, nhoroondo angadaro dzadzimwa.
Unogonawo kuwana kuchonya kubva musikana uyo haasi zvechokwadi kubhadhara nhengo kuti nzvimbo. Kana kubatana mashoko wake angasakwanisa kukwanisa kupindura iye kutoti paysÖ uye iye arege kuita kuti. Kana iye asingadi mari kutaura nemi, zvino iye haana kukodzera nguva yaunayo. Kutamira kune rakatevera söpö musikana pane zvaunonyora.
Red mireza. Ungaziva sei chaiye vanhu kubva all scammers?
“Red mireza” anotsanangurwa sezvo zvinhu zvishoma kuti unogona kutsvaka kwomunhu Profile kuti anoratidza Profile kungava nyepera. Kunyange zvazvo paine chaizvoizvo hapana nzira yokuziva kuti chokwadi kana Profile ariko kana nyepera, pane petsanga tsvuku kuti unofanira chenjerera.
Heino mimwe mienzaniso zvandinoreva kana ndikati “tsvuku mireza”.
– Munhu anokukoka kuti uzvitarise naye panze panguva yakasiyana-website. Izvi vaigona achiri kuva chaiye Profile, asi aigona kuva kukokwa kusaina kuti munhu Porn paIndaneti.
– Kana mukadzi iwe wambosangana, Anotuma shoko zvikuru mberi uye flirty iwe, angangoenda chete kuva Porn muenzaniso kana cam that musikana kuedza kunyengera kwaari Kwawave, kana pfambi kuedza kuwana vatengi.
– A zvake Guy chaizvoizvo zvikuru kana musikana (Tiri kutaura Super womuenzaniso unhu) Anotuma shoko kunyange hamuna kunyange uploaded pikicha kana akazadza kwenyu Profile iwe.
– Girama ari Profile ane murombo chaizvo yepamusoro uye zvinoita vatorwa. Pane zvakawanda ane spammers, kazhinji kubva Russia neNigeria (nedzimwe nzvimbo dzakawanda), kuti zvakananga kunanga kudanana nzvimbo uye nezvimwe pasocial network magazines, akadai MySpace uye Friendster.
– Kana munhu anokumbira mashoko ako pachako akadai nhamba dzorunhare, adhiresi, kana zvimwe mhando pachako kana zvemari mashoko, vangave chete vachishandisa kudanana nzvimbo kuunganidza mashoko kushandisa kuzivikanwa kuba kana zvimwe enhema vanonyengedza.
– Kana paine chikonzero chinoita, munhu kana shoko sokuti 'zvakanaka kuva wechokwadi', izvi zvinofanira kukurudzira imi kungwarira.
Handisi kuti imi havambofaniri vanobvuma mashoko kuti asangane izvi zvinodiwa, asi kana muchidaro, pfuurira nokungwarira!
Waunonzwa yakanaka kana iwe chete kushandisa pfungwa. yeuka, paIndaneti kana kwete, chaiye nyika mitemo vachiri kushandisa.